XILDHIBAANKII DEEQSINIMADA EEDAY..! Xildhibaan Siciid Nuur. | Somalia News
XILDHIBAANKII DEEQSINIMADA EEDAY..! Xildhibaan Siciid Nuur.
Xildhibaan Siciid Nuur waa maalqabeen ganacsi balaaran kuleh dalka iyo dibaddaba, waxa uu noqday xildhibaan mudda-xileedkiisu ahaa 2017/2021.
Waxaa beryahaa la isla dhexmaraayay dhaliilo ku aadan xilibaanka, waase wax dabiici ah marka qof masuul ahi xilqaado, inuu ammaan iyo dhaliil labadaba yeesho, hayeeshee marka doodu (bogaadin ama dhaliil) noocey doontaba ha ahaatee, noqoto midaan maangal ahayn, waa ay macna beeshaa.
Doodaha aan u hinqaday inaan wax ka iraahdo waxay ubadnaayeen kuwo lagu saluugaayay waxqabadka Xil. Siciid, qodobada loo cuskaday dhaliishaas waa badnaayeen waxaan kasoo qaadan karay kuwan:-
1- Dadkiisa waxba uma qaban.
2- Baarlamaanka kama hadlin.
3- Xilkiisa ayuu aduun farabadan ku bixiyay.
Aan ku horeeyo dadkiisa wax uma qaban.
Waxaa marka hore muhiima, in waxqabadka looga baahan yahay xildhibaan la isla fahmo, intaan qodobkaba la daliilsanin, hadii waxa laga hadlaayo ay yihiin mood iyo nool xildhibaanku ku bixiyay dadkiisa waa tane bal horta qabso:-
A. Xildhibaanku waxa uu dadkiisa ka baahi tiray gaashaandhigga, xilli aysan jirin doowlad dadka ka difaacda hagardaamooyinka kaga imaanaayay dadka ay tolkiisu la noolaayeen.
B. Musiibooyinka dabiiciga ah ayuu ku bixinjiray hanti looga samatabixiyo dadkiisa dhibaatooyinka kadhasha, sida markii ay yimaadaan abaaro dadka iyo xoolaahaba laaya.
C- Waxa uu dhaqaale gaara u qoondeeyay inuu kor u qaado aqoonta da’yarta, si ay usoo baxaan jiil waxbartay, Siciid Nuur waa xildhibaanka kaliya ee ka tanaasulay mushaarkiisa dowliga ah, kuna daray dhaqaale kaloo jeebkiisaa si ay wax ugu bartaan caruurta reerka uu kasoo jeedo.
D- Waxa uu ka shaqeeyay in beeshu yeelato jago wasiir tii ugu saameynta badneyd wadanka gudihiisa.
FG: waxqabadka wasiirka kama hadlaayo.
Dooda leh xildhibaanku kama hadlo baarlamaanka iyo idaacadaha, waxaan u waayay sida ay xiriir ula leedahay waxtarka dadkiisa, baarlamaanka waxaa ka buuxa afmaal ku heyb ah xildhibaan Siciid, dood ay ka jeediyeen baarlamaanka/idaacadda oo ay libin/waxqabad ugusoo hooyeenn beesha bal adiguba iisheeg…!? Xildhibaan Siciid igu sawir shaqadiisa maahan ee waa waxtarka dadkiisa.
Waxaa jiray doodo kaloo aan wax kasoo qaad lahayn, laakin inta aan soo xusay waxaa iila liidatay, dooda leh aduun farabadan ayuu ku bixiyay markii uu xilka raadinaayay, waa yaabe ma iyagaa ka dhiiibay qarashka?
Waxaa jirta in Siciid lacagta uu ku bixiyay xilka hadii si gaara loo xisaabiyo, aaney ka badnayn waxa ku baxay xildhibaanada kale, ma jirin heshiis gaara oo ay ergadu kula heshiiyeen xildhibaanka inuu siiyo lacago go’an, hase yeeshee meesha xisaabtu beeshay waa deeqsinimadiisa oo uu u gartay odayaasha lacago dheeriya oo ka baxsan tiil xilka lagu raadinaayay, marka ay halkaa joogto, hadii deeqsinimo dhaliil tahay, waxaan isleeyahay xildhibaanku wuu leeyahay iintaas deeqsinimadu keentay.
Gabagabadii waxaan dhihi lahaa, mudane hadii aad xilka isla jeclaatay ama aad qofkale la dooneyso, fadlan doono ama qofkaagaas la raadi adigoon u gefin madaxdaada, waxaa intaas dheer illaa hadda oo aan fariintaan qoraayo ma hayo meel uu xildhibaanku ku shaaciyay inuu xilka isusoo taagi doono, sida ay u shaaciyeen madaxda kale oo isla jufada dhexdeeda ah xilkana dooneeysa, hadiise ay imaato inuu usoo istaago, waxay ila tahay waa qofka ugu mudan, kana bixi kara.
PS. Beeshu waxay lahayd masuuliyiin kale oo aan Xil. Siciid ahayn, illaa heer federaal iyo heer gobolba leh, oo wasiiro iyo xildhibaanoba isugu jira, marka waxaa la isaga fadhiyaa waxay noo qabteen..!?
Waxaa qoray:- Mohamed Abdi Barre
Previous articleImaam Max’ed Yusuf oo Digniin culus u diray Cali Mahdi. “Reer Imaam ha isku dirin, haddii kale isagoo sidaan..”
Next articleAskar u dhalatay Fiitnaam oo lagu la’yahay dhul go’ ka dhacay xero ay ku sugnaayeen